Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Kanada waxay mamnuucday dhammaan duullimaadyadii rakaabka tooska ahaa ee Morocco
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Moroko News • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Iyada oo ku saleysan talooyinka caafimaad ee ugu dambeeyay ee Wakaaladda Caafimaadka Dadweynaha ee Kanada, Gaadiidka Kanada ayaa ogeysiis u siinaya Airmen xaddidaya dhammaan duulimaadyada tooska ah ee ganacsiga iyo kuwa khaaska ah ee Kanada ka imanaya Morocco laga bilaabo Ogosto 29, 2021 illaa Sebtember 29, 2021.
Gaadiidka Kanada ayaa xaddidaya dhammaan duulimaadyada tooska ah ee ganacsiga iyo kuwa khaaska ah ee Kanada ee ka yimaada Morocco.
Mamnuucidda duulimaadka Morocco waxay dhaqangeleysaa laga bilaabo Ogosto 29 illaa Sebtember 29.
Dadka Kanada waxaa lagula talinayaa inay ka fogaadaan safar kasta oo aan daruuri ahayn oo ka baxsan Kanada
Kanada waxay leedahay qaar ka mid ah tallaabooyinka ugu adag ee safarka iyo xuduudaha adduunka, waxayna mudnaan siineysaa caafimaadka iyo badbaadada dadka reer Kanada iyadoo sii wadata qaadashada hab ku saleysan qatar iyo cabbir si dib loogu furo xuduudaheeda.
Sida walxaha kale ee jawaabta COVID-19 ee Kanada, tallaabooyinka xadka waxay ku saleysan yihiin xogta la heli karo, caddeynta sayniska iyo la socodka xaaladda cudurrada faafa ee Kanada iyo caalamkaba. Kordhinta natiijooyinka baaritaanka togan ee COVID-19 ayaa lagu arkay socdaalayaasha ka imanaya Morocco Morocco bishii la soo dhaafay.
Iyadoo lagu saleynayo talooyinkii ugu dambeeyay ee caafimaadka dadweynaha ee ka yimid Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha ee Kanada, Gaadiidka Canada wuxuu siinayaa Ogeysiis Airmen (NOTAM) xaddidaya dhammaan duulimaadyada tooska ah ee ganacsiga iyo kuwa khaaska ah ee Kanada Morocco laga bilaabo Ogosto 29, 2021, 00:01 EDT ilaa Sebtember 29, 2021, 00:00 EDT. Dhammaan duullimaadyada tooska ah ee ganacsiga iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee Kanada ka imanaya Morocco waxay ku xiran yihiin NOTAM. Hawlgallada xamuulka kaliya, wareejinta caafimaadka ama duulimaadyada milatariga kuma jiraan.
Si loo hubiyo badbaadada duulimaadka iyo in la yareeyo carqaladaha hawlgalka, duullimaadyada ka imanaya Morocco ee hore u sii mari jiray transit wakhtiga daabacaada NOTAM ayaa loo oggolaan doonaa inay u sii gudbaan Kanada. Si ku meelgaar ah, ilaa NOTAM ay dhaqan gasho, dhammaan dadka socdaalka ah ee imanaya duullimaadyadaas waxaa laga rabaa inay qaataan imtixaan markay yimaadaan Kanada.
Gaadiidka Kanada ayaa sidoo kale wax ka beddelaya Amarka Ku-meelgaarka ah ee Ixtiraamaya Shuruudaha Gaarka ah ee Duulimaadyada Rayidka Sababtoo ah COVID-19, oo la xiriira ka-hor-tagitaankii waddankii saddexaad ee COVID-19 tijaabooyinka molikikada si loogu daro dadka u socdaalaya Kanada ee ka socda Morocco iyada oo loo marayo waddo aan toos ahayn. Tani waxay ka dhigan tahay in rakaabka ka taga Morocco ee taga Canada, iyagoo maraya waddo aan toos ahayn, waxaa laga rabaa inay ka helaan tijaabo hore u bixitaanka COVID-19 waddan saddexaad-oo aan ahayn Morocco-ka hor intaysan sii wadin safarkooda Kanada. Shuruudda imtixaanka waddanka saddexaad ayaa sidoo kale dhaqan geli doonta Ogosto 29, 2021, markay tahay 00:01 EDT.
Kanada waxay sii wadaysaa inay si dhow ula socoto xaaladda, waxayna si dhow ula shaqayn doontaa Dawladda Morocco iyo hawl -wadeennada duulimaadyada si loo hubiyo in hab -raacyo habboon loo dejiyey si loo suurtogeliyo in si ammaan ah dib loogu bilaabo duulimaadyada tooska ah isla marka ay oggolaadaan xaaladuhu.
Xayiraadda duulimaadyada ka imanaya waddamada ay khusayso waxay qayb ka tahay habka guud ee Kanada ee ku wajahan maareynta mas'uulka ah ee wax ku oolka ah ee qorshaha dib-u-furitaanka xadka Kanada.
Dadka reer Kanada waxaa lagula talinayaa inay ka fogaadaan safarka aan daruuriga ahayn ee ka baxsan Kanada-socdaalka caalamiga ahi wuxuu kordhiyaa halista soo-gaadhista, iyo faafitaanka, COVID-19 iyo noocyada kala duwan. Tallaabooyinka xudduudda ayaa sidoo kale ah kuwo la beddeli karo iyadoo xaaladda cudurrada faafa ay sii kordhayaan.